Kitaabban - Ibsaa Jireenyaa
Hiika Iimaanaa fi Arkaana Isaa (Meaning of Iimaan and its pillars)
Hiika Wali-Galaa Amanti Islaamaa (General Introduction to Islam)
Hiika Islaamaa fi Laa ilaah illallah (Meaning of Islam and Laa ilaah illallah)
Miidhaa, Fokkinnaa fi Soba Shirkii (Harm, ugliness and falseness of shirk)
Qajeelfamoota Bu’uuraa Maqaalee fi Sifaata Rabbii (subhaanahu wa ta’aalaa)
Ibsa Maqaalee fi Sifaata Rabbii (Subhaanahu wa ta’aalaa)
“Iimaanni sirrii fi tawhiinni qulqulluun waa’ee Rabbii, maqaalee fi amaloota Isaa ilaalchisee beekumsa sirrii qabaachu irratti hundaa’a. Qalbiif jireenyi, qananiin, gammachuun, nageenyi fi tasgabbiin hin jiru yoo Gooftaa, Gabbaramaa fi Uumaa ishii beektee fi wanta Isaan ala jiran caalaa jaallatama ishii yoo ta’e malee. Namni osoo Rabbitti hin amaniin, beekumsaa fi qajeelcha argachuu hin danda’u. Yoo gara Rabbii isaa hin qajeelin immoo kan dararamuu fi azzabamu (adabamu) ta’a.” Ibsi maqaalee Rabbii (Subhaanahu wa ta’aalaa) hanga danda’ameen kitaaba kana keessatti walitti qabame jira.
Tarkaanfilee Jireenya Gammachuutti Nama Geessan
Amaloota Gabroota Ar-Rahmaan
Isin keessa Mallattoo jira, sila itti hin xinxallitanii?
Tafsiira Suuratu Qaaf
Tafsiira Suuratu Al-Qiyaamah, Al-Insaan, Al-Mursalaat, An-Naba’i fi An-Naazi’aat
Tafsiira Suuratu Az-Zumar
Kaayyoo Jireenyi Tuni fi Ilmi Namaa Ittı Uumamaniif
Akkaataa Qur’aanni itti buufamee fi Walitti Qabame
Siiraa (Seenaa) Nabii Muhammad (Sallallahu aleyh wassalam)
Iisaan (Iyyasuus)-(Nageenyi isarratti haa jiraatu ) Eenyuu?
Iisaan (nageenyi isarratti haa jiraatu) nabiyyii kabajama Islaamaa keessatti bakka guddaa qabuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta’aalaa Dandeetti Isaa ifa baasuuf namoota haala afuriin uume. 1ffaa- Nabiii Aadamiin abbaa fi haadha malee biyyee irraa uume. 2ffaa-Hawwaa dubartii malee dhiira qofarraa uume.3ffaa- Ilmaan Aadam immoo haadhaa fi abbaa irraa uume. 4ffaa- dhiira malee Iisaa dubartii qofa irraa uume. Kanaafu, Nabii Iisaan dubarti qofa irraa uumamuun gooftaa ykn ilma gooftaa isa hin taasisu. Rabbiin subhaanahu wa ta’aalaa ni jedha:
“Dhugumatti, Rabbiin biratti fakkeenyi Iisaa akka fakkeenya Aadami. Biyyee irraa isa uume. Ergasi ta’i isaan jedhe. Innis yoma san ta’e. Dhugaan (Haqni) Gooftaa kee irraayyi; kanaafu shakkitoota irraa hin ta’in.” (Suuratu Aali-Imraan 3:59-60)
Akkuma Rabbiin Aadamiin haadha abbaa malee uumee, Iisaas abbaa malee uumuu irratti danda’aadha. Kan nama abbaa fi haadha malee uumee akkamitti abbaa malee nama uumuu dadhabaa? Akkuma Aadamin biyyee irraa ta’i jechuun uumee, Nabii Iisaas ta’i jechuun uumee. Kanaafu, Iisaan makhluuqa (uumamaa)dha malee Uumaa miti. Kitaabni armaan gadii waa’ee Iisaa (aleyh salaam) hamma ta’ee ni dubbata:
Tawbah-Karaa dhiphinnaa fi gadda keessaa gara bal’innaa fi gammachuu itti bahan
Zinaa (sagaagalummaa) Irraa Akkamitti Of Eeganii?
In sha Allah kitaabban dabalataa asitti ni maxxanfamu…
April 11, 2019	6:46 pm
Rabbiin jazaa keessan jannataan haa deebisu
April 12, 2019	7:22 pm
April 30, 2019	1:10 am
Fayyada, Milkii irra ol’antii dabaalladhu
Ani waninnii jayuu hin bekkuu ani gammaa kiyyan hedduu takkan sii jaaladha rabbiin jirruf jirrenyaa kee sif haa tolochuu jzh kee jaanata hatahuu heeduu takka galatoomii nafii jirradhuu.itti fufii
August 15, 2019	8:20 am
September 15, 2019	4:11 pm
Rabbi isin irraa haa jaalatu maashaa Allaah
December 5, 2019	1:46 pm
MashaaAllah MashaAllah jkl
December 16, 2019	12:06 am
Jazaakumullaa jabaadhaa ammallre
January 25, 2020	12:15 am
Maashaa Allaah Rabbiin isiin irraa haa jaalatuu jzk
March 5, 2020	5:06 pm
Maashaa allaa jzk.kheeyran
May 7, 2020	1:16 am
Jazaakumullaahu keeral jazaa
May 7, 2020	1:19 am
July 29, 2020	10:47 am
Khuleyfi sheikh Aliyi
August 12, 2020	12:28 am
Rabbiin jazaa keessan jannataan haa deebisu , isinirraa jaalatee isin haa jaalatu.
August 12, 2020	9:12 pm
March 4, 2021	7:00 pm
Aswrwb aaah maashaa allaah tabaarakallaah itti nuuf fufaa daranuu afaan keenyaan dheebuu ilmii nu baasaa jzk
Masaa Allaah Rabbiin sin irraa haa jaallatu!!
March 9, 2021	2:39 am
March 21, 2021	3:25 pm
April 28, 2021	1:30 pm
Maashaa allaah rabbiin umrii dheertuu isiniif haa kennu
May 2, 2021	3:35 am
Maasha Allah yaa rabbi obboleewwan koo kana milkeessi.toltu duniya aakhira badhaasi hamtuu duniya aakhira irra qabi
Maashaa allaah ummata keenyaaf bu’aa guddaa buusaa jirtuu